Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguChantal
Jonga apha ngasezantsi ngamanqaku aBalulekileyo malunga ne-COVID kunye noKhuseleko lweNook
I-Nook yethu encinci ikwisitrato esithe cwaka, esinesiphelo esivakala ngathi sisezweni! Eli gumbi licocekileyo neliqaqambileyo lizele ngumtsalane we-rustic, ukuba kungakhathaliseki isizathu sokutyelela kwakho, le ndawo epholileyo iya kukwenza uzive ulungile ekhaya!
Eli gumbi linegumbi lokulala eli-1 linayo yonke into oyifunayo! Ikhitshi eligcweleyo kunye nezixhobo zombane, indawo yokuhlala / yokutyela enendawo yomlilo epholileyo yombane, igumbi lokuhlambela elineziqwenga ezi-3 kunye negumbi lokulala elinebhedi enkulukazi.
Phumla kwaye uphumle ngelixa usonwabele umabonakude ngentambo epheleleyo, dlala imidlalo yebhodi okanye wonwabele iWi-Fi yethu yasimahla.
Esi sithuba sinesango lokungena elahlukileyo elinekhowudi yokungena yesitshixo kwaye libucala ngokupheleleyo. I-Nook ingaphakathi kwikhaya lemikhosi, kodwa akukho zithuba ekwabelwana ngazo. Kukwabandakanyiwe nendawo yokupaka enikezelweyo kodwa kukho indawo yesithuthi esinye kuphela... kusenokwenzeka ukuba kuhlaliswe izithuthi ezi-2 kodwa oku makulungiswe kuxoxwe kwangethuba.
Siza kubonelela ngekofu, iti kunye nezilungiso kunye netyuwa, ipepile kunye neoli.
Esi sitrato sendawo ezolileyo sijikelezwe yimithi kunye nendalo. Ilizwe liziva ngaphakathi kwesixeko, ligqibelele ngokubona amaxhama ngamaxesha athile!
Akukho nto eNorth Bay ikude kakhulu. Singaphakathi kwimizuzu emi-5 yokuqhuba ukuya elunxwemeni, iindawo zokutyela, iikhemesti, iivenkile zotywala, imiboniso bhanyabhanya, iSteve Omischl Sports Field Complex kunye nokuthenga!
Sinikezela ngesango lokungena labucala ngokwakho. Sihlala kwizakhiwo kwaye silapha ngenxa yakho. Sibhalele ukuba ufuna nantoni na, kodwa siya kuqiniseka ukuba siyayihlonipha imfihlo yakho!